ကျွန်တော်နှင့် ခံစားချက် | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
” ခံစားချက်ဆိုတာ ဖန်တီးယူလို့ရတယ် ဆိုတာကို ထောက်ခံပါသလား ” လို့ ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့ ကန့်ကွက်မဲ ပေးကြတာကတော့ မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအားလုံးကပါပဲ။ ဖန်တီးယူထားတဲ့ ခံစားချက်က ခံစားချက် အစစ်မဟုတ်ဘူးလို့ သူတို့က ပြန်ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဖန်တီးယူတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့  အဓိပ္ပါယ်ကိုယ်က ခံစားချက်နဲ့ ဆက်စပ်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဖန်တီးယူတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့  အဓိပ္ပါယ်မှာ တန်ခိုးရှင်တစ်ယောက်က လုပ်လိုက်သလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေလို့ပါ။ ကျွန်တော့ရဲ့  မေးခွန်းက မှားသွားတာပါ။ ဒါဆိုရင်ခံစားချက်ဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲ။
” ခံစားချက်ဆိုတာ တည်ဆောက်ယူရတာပါ၊ တည်ဆောက်ယူထားတာပါ၊ တည်ဆောက်ယူနေတာပါ။ ”
ဒီနေရာမှာ ခံစားချက်ဆိုတာ မိမိရဲ့ ခံစားချက်ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ အခြားသူတစ်ဦး ဦးရဲ့  ခံစားချက် ကို မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ဆိုတာ ကိုယ်ကိုတိုင်တည်ဆောက်ယူရတာ၊ တည်ဆောက်နေတာပါ။ အတိတ်တုန်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ တွေ ခံစားချက်တွေကို တည်ဆောက်လာခဲ့ကြတယ်၊ အချို့  ခံစားချက်တွေက အတိတ်မှာပဲ ကျန်နေခဲ့ကြတယ်။ အချို့  ကတော့ ပစ္စုပ္ပန် အခုလက်ရှိအချိ်န် အထိ တည်ဆောက်နေဆဲပဲ။ အချို့ ကလည်း အနာဂတ် အထိ တည်ဆောက်ယူဖြစ်သလို၊ အချို့  ကတော့ အနာဂတ်ကြတော့မှပဲ တည်ဆောက်ယူဦးမှာပါ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။ တခါတလေ တချို့  ခံစားချက်တွေက ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အဲလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်ကို ရော တည်ဆောက်ယူထားတာလို့ ဆိုနိုင်သလားတဲ့။ သူပေးတဲ့ ဥပမာက သူက သူ့ သူငယ်ချင်းကို အရမ်းခင်တယ်၊ သူငယ်ချင်းကို ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာကို သူငယ်ချင်းက ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းက သူ့ကို ရုတ်တရက် ၀မ်းနည်းသွားစေတယ်။ အဲဒီလို ခံစားချက်ကြတော့ တည်ဆောက်ယူတာ ဟုတ်ပါဦးမလား လို့ ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ယူထားတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ယူထား တဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုပါပဲ။ သူဟာအဲဒီသူငယ်ချင်းကို အရမ်းခင်တယ် လို့ သူကိုယ်တိုင်သက်မှတ်ထားတယ်။ သူကိုယ်သူ သူ့သူငယ်ချင်းကို ကောင်းစေချင်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ သူကိုယ်တိုင် သက်မှတ်ထားတယ်။ သူပြောတဲ့ စကားဟာ ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာလို့ သူကိုယ်တိုင် သက်မှတ်ထားတယ်။ ဒါကြောင့် ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတဲ့ စကားတစ်ခုကို သူ့ သူငယ်ချင်းက သူ့ကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ နားထောင်လိုက်နာလိမ့်မယ်လို့ သူ့ မျှော်လင့်ချက်ကို သူကိုယ်တိုင် သက်မှတ်ထားတယ်။ မျှော်လင့်ထားချက်တွေ ဖြစ်မလာရင် ၀မ်းနည်းမယ်လို့ သူကိုယ်တိုင် သက်မှတ်ထားတယ်။ (ဒါကတော့ သူဒီသူငယ်ချင်းကို ပြောတဲ့ အချိန်မှာ သက်မှတ်ထားတာ မဟုတ်ပဲ သူဘ၀တစ်လျောက်မှာ မသိစိတ်က သက်မှတ်လာတဲ့ သက်မှတ်ချက်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။) ဒီလိုနဲ့ ပဲ သူကိုယ်တိုင် သက်မှတ် တည်ဆောက်လာတဲ့ အရာတွေကနေ ၀မ်းနည်းမှုကို သူကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ယူသွားတာပါ။ ဒီနေရာမှာ သူ့သူငယ်ချင်းက ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နားထောင် လိုက်နာမယ်ဆိုရင် သူ သက်မှတ် တည်ဆောက်ထားတဲ့ အရာတွေကနေ ကျေနပ်ပီတိမှု ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို သူကိုယ်တိုင် တည်ဆောက်ယူဖြစ် ဦးမှာပါ။
တည်ဆောက်ယူတယ်၊ တည်ဆောက်ထားတာ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖန်တီးယူတာနဲ့ မှားယွင်း ယူဆပြီး ခံစားချက်ကို ဘယ်လို တည်ဆောက်ယူလို့ ရမလဲလို့ မေးတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အဖြေကတော့ ခံစားချက်ကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ ပုံသေနည်း မရှိပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခံစားချက်ဆိုတာ ချက်ချင်းတည်ဆောက်ယူလို့ ရတာရှိသလို ဖြည်းဖြည်းချင်း တည်ဆောက်ယူရတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။
လူတစ်ဦးဟာ မွေးဖွားလာကတည်းက သူ့ရဲ့  ကိုယ်ပိုင် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို ဦးနှောက်မှာ သိုလှောင်ထားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာလည်း အသစ်အသစ်သော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို သိုလှောင်နေတုန်းပါပဲ။ အဟောင်းတွေကို လည်း ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ အနာဂတ်မှာလည်း ဆက်ပြီးတော့ သိုလှောင်နေဦးမှာပါပဲ။ ပြင်ဆင်နေဦးမှာပါပဲ။ ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေလည်း ဆိုရင် ဘာသာစကားတွေကို နားမလည်ခင် ကလေးဘ၀ကတည်းက သိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကတော့ မြင်ရတာတွေကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပါတယ်။
ကလေးတစ်ယောက်ပထမဦးဆုံးမြင်ရတဲ့ အရာကဘာလို့ထင်ပါသလဲ။ ”အပြုံး”ပါ။ ကလေးအားလုံးလို့ မဆိုသာပေမယ့် ကလေးအများစုမြင်ရတာကတော့ အပြုံးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူသားတွေအားလုံးနီးပါး ရဲ့  အသိဥာဏ်မှာ အပြုံး ဆိုတာ ”အသိအမှတ်ပြု ကြိုဆိုမှုခံရခြင်း” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခု အတူတူရှိနေကြတာပါ။ အဲလိုပဲ အခြားသော အမြင်၊ အကြား အသံတွေကို လည်း စတင်ပြီးတော့ အဓိပ္ပါယ် သက်မှတ်ပါတော့တယ်။ ဘာသာစကားတွေ တတ်ကျွမ်းလာတော့ အဲဒီ ဘာသာစကားတွေ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ထပ်ပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကို တည်ဆောက်ပါတော့တယ်။
ဒီလိုမျိုး ကိုယ်ကိုတိုင်အဓိပ္ပါယ်တွေဖွင့်ဆိုတည်ဆောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို တည်ဆောက်ယူထားတာပါလို့ ပြောတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သူက သူလိုချင်တဲ့ ချစ်သူကို ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီး သက်မှတ်ချက်တွေကို သူသက်မှတ်ထားတယ်။ အဲဒီသက်မှတ်ချက်တွေရှိတဲ့ သူကိုမှ ချစ်သူ ထားမယ်လို့ သူသက်မှတ်ထားတယ်။ သူ့ကို ချစ်ခွင့်ပန်တဲံ လူတစ်ယောက် အဲဒီသက်မှတ်ချက်တွေရှိပေမယ့် သူမချစ်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသက်မှတ်ချက်တွေ မရှိပေမယ့် လည်း အခုသူ့ ချစ်သူကို သူချစ်တယ်။ သူ့ ချစ်သူကို အဲဒီလို ဦးနှောက်နဲ့ သက်မှတ်ထားပေမယ့် အဲဒီသက်မှတ်ချက်အတိုင်း သူ မလိုက်နာနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကရော ခံစားချက်ဆိုတာ တည်ဆောက်ယူလို့ ရတယ် လို့ ဆိုနိုင်ပါဦးမလား လို့ ပြောပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် လို့ပဲ ပြောရပါမယ်။ သူကိုယ်တိုင် သူ့ရဲ့ မသိစိတ်ကနေပြီး တည်ဆောက်ယူလိုက်တာကို မသိလိုက်တာပဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အတိတ်က ဖြစ်တည် တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်တည် တည်ဆောက်နေတဲ့ ခံစားချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး သူ့ရဲ့  ချစ်စိတ်ကို တည်ဆောက်ယူသွားတာပါပဲ။ သိစိတ်က သူ့ရဲ့  ချစ်သူရဲ့ ပုံစံကို သက်မှတ်ထားပေမယ့် မသိစိတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှု၊ မသိစိတ်က တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ခံနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ အဆုံးမှာ သိစိတ်နဲ့ ခံစားချက်ကို မတည်ဆောက်နိုင်တော့ပဲ၊ မသိစိတ်ရဲ့ တည်ဆောက်မှုကို ခံလိုက်ရတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သိစိတ်၊ မသိစိတ်လို့ ခွဲခြားပြောနေပေမယ့် နှစ်ခုစလုံးက ကိုယ့်ရဲ့  စိတ်ပါပဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ သံသရာမှာ ကျင်လည်နေကြတာ အတော်လေးကို ကြာကြပါပြီ။ အဲဒီလို ကျင်လည် နေကြတဲ့ လူတစ်ဦးချင်းစီမှာ သူတို့ကိုယ်ပိုင် ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတွေရှိကြပါတယ်။ လူတစ်ဦးဟာ သူကျင်လည်ခဲ့ တဲ့ ဘ၀ဘ၀တွေက ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံတွေကို အခြေပြုပြီး အခုဘ၀မှာ ဆက်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ ကို တည်ဆောက်ပါတယ်။ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ကုသိုလ်ကံ၊ အကုသိုလ်ကံ ပေါ်မှာမူတည်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ယခုလက်ရှိ ဘ၀မှာ တူညီနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူပြောသလို သူ့ချစ်သူကို ချစ်ရမယ့် ကံကသူ့စီမှာ ပါလာပါတယ်။ သူဒီဘ၀မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်၊ ဘ၀အဆက်ဆက်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့  ကံတရားအတိုင်းပဲ သူက သူ့ချစ်သူကို ခံစားချက်တည်ဆောက်လာပြီး ချစ်သွားတာပါ။ ဒါကို ဖူးစာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ သူ့ရဲ့  အတိတ်က တည်ဆောက်လာတဲ့ အတိုင်းသူဖြစ်သွားတာပါ။ တချို့  တွေဆိုရင် အလွန်ကို ပဲ ဆိုးသွမ်းတဲ့ သူတွေကို အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ခံစားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာလည်း သူ့ရဲ့  အတိတ်က တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ကံတရားရဲ့  ရောင်ပြန်ဟတ်မှုပါပဲ။
ဒါဆိုရင် အတိတ်က တည်ဆောက်ခဲ့မိတဲ့ အတိုင်း တသွေမသိမ်း ဖြစ်တော့မှာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ပစ္စုပ္ပန်ကို ပိုင်ဆိုင်တာ ကိုယ်ကိုတိုင်ပါပဲ။ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဖြစ်တည်မယ့် အရာအားလုံးကို ကိုယ်ကသာ ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကိုတိုင် စီမံခန့်ခွဲလို့ ရပါတယ်။ ဒါဆို ဘယ်လိုခန့်ခွဲမလဲ။ အသိ၊ သတိ ဆိုတဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းပြောတဲ့ စကားနဲ့ပဲပြောပါမယ်။ ဒါဟာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ထားရှိခဲ့တဲ့ တရားပါပဲ။ ကိုယ်ဘာဖြစ်နေတယ် ဘာလုပ်နေတယ် ဆိုတာကို သိစွမ်းနိုင်တဲ့ ပညာ သတိ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကို ကိုယ် စီမံခန့်ခွဲ နိုင်ပါပြီ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ခံစားချက်တွေကို အသိ၊ သတိကြီးနဲ့ စီမံခန့်ခွဲနေရင် ဘယ်လိုလုပ် ခံစားချက်က အသက်ပါတော့မလဲလို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်မှတော့ ခံစားချက် အစစ်အမှန်ဘယ်ဟုတ်ပါတော့မလဲလို့ ပြောတယ်။ နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်မှသာ ခံစားချက် အစစ်အမှန်လို့ ပြောရမှာ ပေါ့လို့ ပြောပါတယ်။
နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ သူဟာ ဦးနှောက်နဲ့ စဉ်းစားပြီး တီထွင်ခဲ့တာပါ။ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ကပဲ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နှလုံးသား ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ ခံစားချက်တွေကို ဖွဲ့နွဲ့တဲ့ အခါမှာ ဦးနှောက်ဆိုတဲ့ စကားလုံးအစား နှုးညံ့သိမ့်မွေ့မှု ရှိတယ် ဆိုပြီး သုံးနှုန်းကြပါတယ်။
အဓိကအားဖြင့် ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက ဦးနှောက်နဲ့ ခံစားတာ၊ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားတာကို ငြင်းခုံချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေ စိတ်ခံစားချက်ကို လေ့လာပြီး လူသားတွေအနေနဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ဘယ်လို သဘောထား သက်မှတ်ကြသလဲဆိုတာကို သုတေသန သေးသေးလေးလုပ်ကြည့်ချင်တာက အဓိကရည်ရွယ်ချက်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ခံစားချက်တွေအကြောင်း ပြောကြရင် ခံစားချက်ဆိုတာ
၁) အခြားသူ တစ်ဦးဦး၊ တစ်စုံတစ်ခုကြောင့် မိမိတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်တွင်း လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုး
၂) မိမိရဲ့  ရုပ်ခန္ဓာကြီးရဲ့ ဖောက်လွှဲ ဖောက်ပြန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်တွင်း လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုး
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်အနေနဲ့ ခံစားတယ်ဆိုတာ ဥပေက္ခာတရားနဲ့ ခံစားခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံး ဆိုတာကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ခံစားချက် တစ်ခုပြီး တစ်ခု နှစ်ရှည်လများ တည်ဆောက်ယူကြည့်တယ်။ အသိ သတိ ကပ်ကြည့်တယ် ၊ အသိ သတိတွေကို လွှတ်ပြီး ခံစားကြည့်တယ်။ အမျိုးမျိုး စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ သိရှိခဲ့ရတာကတော့ ဘယ်လို ခံစားချက်မျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဥပေက္ခာတရားနဲ့သာ ခံစားမယ်ဆိုရင် တကယ်ကို ပဲ ခံစားချက်က မွန်မြတ်ပါတယ်။
ဥပေက္ခာတရားဆိုတာ မိမိခံစားတဲ့ အတိုင်း၊ ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်း အရာရာသည် ဖြစ်ချင်ဖြစ်မည်၊ မဖြစ်ချင်မဖြစ် အားလုံးသည် သူ့သဘောသူဆောင်ကာ ဖြစ်ပျက်နေသည်ကို သိရှိခြင်းလို့ သဘောပေါက်ထားပါတယ်။
လူသားတွေ အတော်များများဟာ ခံစားချက်တွေရဲ့  အနိုင်ယူခြင်းကို ခံကြရပါတယ်။ ဒါဟာ ခံစားချက်ကို မခံစားတတ်လို့ပါပဲ။ ခံစားချက်တွေကို ခံစားတတ်သွားရင် ခံစားချက်ရဲ့  အနိုင်ယူတာကို ခံရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထိန်းသိမ်း စီမံဖို့ရာ အလွန်ကိုပဲ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မဖြစ်နိုင်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစားချက်တွေကို တည်ဆောက်တဲ့ နေရာမှာ ဥပေက္ခာတရားနဲ့ သာ တည်ဆောက်နိုင်မယ်၊ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဥပေက္ခာတရားနဲ့ သာခံစားမယ်ဆိုရင် ခံစားချက်ကြောင့် ခံစားရမှာ မဟုတ်တော့ပဲ ခံစားချက်ကို ခံစားတတ်လာမှာပါ။
၂၀၁၀၊ ဒုတိယလ၊ ၈ ရက်
This entry was posted on Tuesday, February 9th, 2010 at 8:20 pm	and posted in ကျွန်တော်နှင့်.., အတွေးအခေါ်.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Web Pageတွေကကြော်ငြာတွေကို bLOCK ရအောင် »
3 responses to “ကျွန်တော်နှင့် ခံစားချက်”
ရှင်းထားတာ တော်တော်လေးကောင်းတယ် .. post တွေကို comment ပေးလေ့တော့မရှိဘူး .. ဒီ post ကတော့ ခံယူထားတာ တော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်တာရယ် .. တော်တော်လေးသဘောကျသွားလို့ .. ဒါပေမဲ့ .. ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတော့ ဘ၀င်မကျဖြစ်နေတယ် .. ဘယ်အပိုင်းကိုလဲ . ဘယ်စာသားကိုလဲ ဆိုတာ သေချာ စဉ်းစားပြီး . ကြုံကြိုက်ရင် အပြုသဘောဆောင် debate လုပ်ချင်ပါသေးတယ်..
ဟုတ်ကဲ့ အခုလိုပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကြုံကြိုက်ရင်လည်း debate လုပ်ပေးပါဦးဗျ…..